warkii.com » Samantha Akkineni oo banaanka soo dhigtay jaceylkee u qabtay Shah Rukh Khan mudada dheer!!
Samantha Akkineni oo banaanka soo dhigtay jaceylkee u qabtay Shah Rukh Khan mudada dheer!!
Telugu Star Samantha Akkineni ayaa si diiran oga hadashay waxyaabaha ay ku jeclaatay Bollywood King Khan Aka Shah Rukh Khan oo lagu yaqaano inta badan inuu gabdhaha badankooda qalbiga ka xado.
Megastar-kan ayaa guud ahaan daawadayaasha kusoo jiito seddex waxyaabood oo kala ah xirfadiisa qaab jiliin ee kala nooc-nooca ah, la dhaqanka bulshada qaab xushmadeysan oo soo jiidasho leh iyo hab u hadalkiisa oo waa atoore heybad u leh qaabku u hadllaayo inuu kugu soo jiito.
Samantha ayaa taageerayaasheeda la wadaagtay muuqaal hore oo SRK kaga hadlaayey 5-hadiyadood uu aabihiis siiyay inta uusan geeriyoon kahor waxuuna hadiyadahaas ku tilmaamay Khan kuwa ugu qaalisan noloshiisa inta kadhiman.
Gabadhaan ayaa shaacisay inee ka heshay qaabkuu SRK u hadlay waxayna ku tilmaamtay mid kamid ah shaqsiyaadka nolosheeda ay baratay kuwii ugu hadalka qurxoonaayeen sido kale waxay sheegtay inee aad u jeceshahay jilaagan taageero weyna u tahay ilaa yaraanteeda.